Fikarohana momba ny firaisana Trangan'ny Transgender sy ny Zafindrafin'ny Babe Didrikson Zaharias | Bruce Jenner - Fikarohana momba ny vatana vaovao
Bruce / Caitlyn Jenner dia manambara fa izy dia Transgender
Tamin'ny volana 2015, Bruce Jenner Niaiky ampahibemaso izy fa miala amin'ny maha-vehivavy azy izy. Ao amin'ny valin'ny 1200 dia nanamarina ny voka-piterahana indray ao amin'ny vatana vaovao Ian Stevenson, MD an'ny Oniversiten'i Virginia, Hitan'ny Dr. Stevenson fa ny fanahy dia manova ny lahy sy ny vavy amin'ny 10 isan-jaton'ny tranga fotsiny. Amin'ny tranga azo tamin'ny asako niaraka tamin'i Kevin Ryerson, dia misy ihany koa ny ampahany mitovy amin'ny tranga misy fiovan'ny lahy sy ny vavy, manodidina ny 10 isan-jato. Ireo fandinihana ireo dia manondro fa ny fanahin'ny olona iray dia manana lahy sy vavy tiany ho tonga nofo.
Fiovan'ny lahy sy ny vavy amin'ny tranga momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao sy ny firaisana ara-nofo
Ny fikarohana nataon'i Dr. Stevenson dia mampiseho ihany koa fa amin'ny tranga izay hisian'ny fiovan'ny lahy sy ny vavy, ny olona teraka indray ao amin'ny vatana vaovao dia mety hanana olana momba ny maha-lahy na maha-vavy. Raha lazaina amin'ny teny hafa, rehefa misy lehilahy teraka indray ao amin'ny vatana amin'ny maha-vehivavy azy dia mety mbola mitazona toe-tsaina lehilahy ny toetra teraka indray. Mifanohitra amin'izany, raha misy vehivavy teraka indray ao amin'ny lehilahy, dia mety maharitra ny toetra vehivavy. Amin'ny tranga sasany dia mety hitarika ilay olona teraka indray ao amin'ny vatana vaovao ho samy lehilahy na samy vehivavy na samy vehivavy na transsexual / transgender.
Ny fiainana taloha nataon'i Bruce Jenner amin'ny maha Babe Didrikson Zaharias azy
Ireo fandinihana ireo dia nahatonga ahy hanontany tena momba ny nofo taloha nataon'i Bruce Jenner. Amin'ny fivoriana miaraka amin'i Kevin Ryerson, mpitarika ny fanahy Ahtun Re nanambara fa ny fiainam-piainan'i Bruce farany teo dia ny atleta vehivavy iray izay vehivavy voalohany nifaninana tamin'ny Lalao Olaimpika. Ankoatr'izay, nilaza i Ahtun Re fa nandresy hetsika ity vehivavy ity izay ao anatin'ny decathlon olympika ankehitriny. Tamin'ny fikarohana vitsivitsy no nahitako kandidà mety ho any Babe Didrikson Zaharias, izay niaina tamin'ny 1911 ka hatramin'ny 1956. Nandritra ny fivoriana nanaraka tamin'i Kevin, Ahtun Re dia nanamafy fa i Bruce Jenner dia ny vatana vaovao indray tamin'ny Babe Didrikson Zaharias.
Fiainana Talenta Taloha: Decathalon Event Medaly
Ny decathlon dia ahitana 10 traikefa sy sehatra an-tsehatra: ny 100, 400 ary 1500 metatra dia mihodina, ny 110 metatra helmles, ny sambony lava sy avo, ny vaovaon'ny poleta, ny voatifitra napetraka, ny discus throw sy ny javelin throw. Amin'ny ankapobeny, nomena ny lohatenin'ny "Worlds Greatest Athlete" ny mpandresy tamin'ny lalao Olaimpika, toa an'i Bruce Jenner.
Babe Didrikson Zaharias dia nifaninana tamin'ny Olympika 1932 natao tao Los Angeles. Tamin'ity taona ity dia navela hifaninana tamin'ny hetsika maromaro ny vehivavy ary tsy nisy ny decathlon vehivavy. Tamin'ny lalao Olaimpika 1932, nandresy medaly i Babe tao amin'ny 80 metatra, ny fitsangatsanganana avo sy ny leopolo, izay mandinika ny fahaiza-manao ilaina handresy ny decathlon, izany hoe mihazakazaka, mitsambikina ary manipy.
Babe koa dia mpilalao golf tompon-daka, izay maneho ny fitiavan'i Bruce Jenner ny lalao golf. Niavaka tamin'ny fanatanjahan-tena hafa koa izy. Babe dia fantatra ho mpifaninana masiaka izay nanome azy rehetra, toa an'i Bruce Jenner. Noho ny zava-bitany dia nantsoin'ny Associated Press ho "Atleta lehibe fahasivy lehibe indrindra tamin'ny taonjato faha-XNUMX" izy.
Fiainan'ny vehivavy taloha i Jen Jen Jenner
Ahtun Re dia nanambara ihany koa fa amin'ny ankamaroan'ny nofo nofo Bruce Jenner dia vehivavy i Jenner. Amin'ireto fiainana taloha vehivavy ireto, i Jenner dia nampiseho fironana mitovy amin'ny lasa mpanao fanatanjahan-tena tena tia fifaninanana, na dia azo lazaina amin'ny fomba maro aza io toetra io, toy ny mpiady vehivavy. Ny tian'ny fanahin'i Jenner ho an'ny nofo nofo vehivavy dia manazava ny antony nanambaran'i Jenner fa manana vehivavy izy ary nahoana izy no transgender.
Ny firaisana amin'ny vatana vaovao sy ny maha-lahy sy maha-vavy
Ho valin'ny fangatahana nataoko mikasika ny olana momba ny maha-lahy sy vavy, Ahtun Re dia nanambara fa misy ny tsy fitoviana amin'ny antony maha-olona azy ireo. Ny sokajy tsotra indrindra mba hahatakarana dia ny olona marary saina, satria saika saika ny olona rehetra dia avy amin'ny fanahy iray izay tonga nofo ho lahy, izay tsy nampiasaina, toy ny an'i Babe Didrikson Zaharias | Bruce Jenner.
Mifanohitra amin'izany kosa, ny antony mahatonga ny olona ho samy lehilahy na lahy samy vavy dia samy hafa. Ahtun Re dia nanambara fa ny ampahany kely amin'ny lehilahy pelaka sy lesbiana dia noho izy ireo niditra ho andian-dehilahy izay tsy nampiasaina. Ny raharaha Ian Stevenson an'ny miaramila miaramila Japoney | Ma Tin Aung Myo dia ohatry ny ohatra iray, izay nisy lehilahy miaramila nanova ny tovovavy fa kosa nitazona ny toe-tsaina lahy. Na dia vehivavy iray aza, Ma Tin Aung Myo dia nitazona fiheverana ara-batana ho an'ny vehivavy ary nanjary lesbiana izy. Mba hamerenana ity tranga ity dia mandehana any:
Ny raharaha momba ny fanambadiana gikan-jotra nataon'ny miaramila Japoney Ma Tin Aung Myo
Ahtun Re dia niteny fa mifanohitra amin'izany, ho an'ny ankamaroan'ny olona izay samy lehilahy na lahy na vavy, izany fotsiny dia ny toetry ny fanahin'izy ireo. Ireo olona ireo dia miezaka ny hiverina indray amin'ny fisarahana miaraka amin'ny fitovizan-kevitra mitovy, ho an'ny lehilahy na vehivavy mitovy taovam-pananahana.
Ny olona iray dia mety ho samy lahy na samy vavy ihany koa noho ny antony marim-pototra. Ohatra, raha misy mpandala ny nentin-drazana sy manameloka na manenjika ireo olon-pon'ny samy lahy na samy vavy, io olona io dia mety mila manana traikefa amin'ny maha lahy na vavy mitovy taona aminy amin'ny maha-traikefa fianarana azy.
Ny zavatra manan-danja dia ny tsy hitsara ny hafa noho ny firaisana ara-nofo na ny maha-lahy sy vavy azy raha toa ka tsy mitovy amin'ny antsika ireo toetra ireo. Isika rehetra dia afaka mahatsapa ny androm-piainantsika izay maha-pelaka, lesbienne, transsexual na hafa ny maha-lahy sy maha-vavy.
Fihetseham-batana ara-batana ao amin'ny vatana vaovao: Ao amin'ny sarin'i Bruce Jenner tanora, ny fitoviana ara-batana amin'ny Babe Didrikson Zaharias dia tsy hita amin'ny sary ao amin'ny Jenner rehefa mihodina ho vehivavy izy. Rehefa mihalehibe i Bruce dia vao mainka izy toa an'i Babe.
Ny fiainana taloha talenta: Ny fanahin'ny mpifaninana Babe amin'ny atletisma sy ny fahombiazany ara-panatanjahantena dia hita taratra eo amin'ny fiainan'i Bruce Jenner.
Ny fihenam-bidy: Maty tamin'ny 1956 i Babe Didrikson Zaharias, raha teraka tao amin'ny 1949 i Bruce Jenner. Noho izany, ny fiainan'izy ireo dia nihoatra ny 7 taona. Noho izany dia miteraka tranga iray amin'ny fisarahana ny fisoronana vaovao, izay ahafahan'ny fanahy manasongadina ny fihavaozana roa amin'ny fotoana iray.